Danjiraha: Cunaqabataynta hubka hallaga qaado Soomaaliya – Somalia
Danjiraha: Cunaqabataynta hubka hallaga qaado…
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Danjire Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay baahi wayn u qabto in laga qaado xayiraadda hubka ee saaran si ay uga adkaato kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ka wada Soomaaliya iyo gobolka bariga Afrika.
Wareysi uu siiyay Wargeysta Bariga Afrika ee ka soo baxa dalka Kenya Axaddii, ayuu danjire Tarsan ku sheegay “Waxaa jira dadaallo badan oo ay ciidanka AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan si ay guulo u gaaraan, Laakin ciidankeennu waxauu u baahan yahay hub horumarsan iyo tababar, Ciidankeenu waxa ay haystaan hubka ay haystaan kooxada Al-Shabaab oo kale, haddaba sideen u noqon karnaa kuwa guulaysta?”
Danjiraha ayaa sii raaciyay (Tusaale), Mareykanka oo haysta ciidanka ugu xooggan uguna qalabka fiican adduunka ayaa kula dagaallamaya Daalibaan dalka Afghanistaan 17 sano, laakin ma aysan ka guulaysan wali, ayagoo xittaa ka hub sarreeya, Marka sideed uga rajaynaysaan dowladda Soomaaliya oo ay saaran tahay cunaqabataynta hubka ee Qaramada Midoobay in ay si xoog leh ula dagaasho Al-Shabaab”.
“Waxay la mid tahay in ay gacmaha naga xireen, kaddibna -caalamku noo sheegayo in aan la dagaallano Al-Shabaab.
Mar la waydiiyay sida ay dowladda Soomaaliya u aragto ka bixidda ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ayuu danjire Tarsan yiri.
“Aragtideennu waa in haddii ciidanka AMISOM ay baxayaan lagu beddelo ciidanka Soomaaliya oo aad u tababaran, una hubeysan. Caqabaddu waxay tahay, beesha caalamka ayey ahayd in ay nagacaawiyaan tababarka iyo qalabaynta 30 kun oo ciidanka XDS ah marka ay AMISOM dalka ka baxayso 2021-da, laakin taasi ma socoto hadda, Waxay la micno tahay ciidanka XDS hadda ma buuxin karaan kaalintaas”.
Danjire Tarsan ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dalka kaliya ee Afrika ku yaalla ee dagaal kula jira laba urur oo argagixiso caalami ah.
“Kaliya lama dagaallamayno Al-Shabaab, laakin waxaan sidoo kale la dagaallamaynaa ISIS ama Daacish, Soomaaliya waa dalka kaliya eeAfrikaan ah ee la dagaallamaya laba urur oo argagixiso caalamiya ah oo kujira xudduudaheena, beesha caalamkuna waxa ay wali nagu haysaa cunaqabatayn hub oo saaran dalkeenna, Hadda, waxaan wajahaynaa caqabad kale oo hub ayaa si sharci darro ah dalkeena uga soo galaya Yemen. Waa xuquuqda madax-bannaanideenna in aan difaacno nafteenna, laakin sideen ula dagaallamaynaa kooxahaas haddii aananhubeyn Karin ciidankeenna?
Sidaas darted, waxaan jeclaan lahayn in dowladaha gobolku oo ay Kenya ugu horreyso nooga ololeeyaan fagaarayaashacaalamiga ah, si cunaqabataynta hubka looga qaado waddankeenna. Ayuu yiri Danjire Tarsan
Category: Faafin, WarsaxaafadeedBy Admin February 14, 2019 Leave a comment
PreviousPrevious post:Minxooyin Waxbarasho oo Switzerland ah. PhD, PostDoctoral iyo Research FellowshipNextNext post:Kulan Looga Hadlayo Xoojinta Tamarta Soomaaliya oo Nairobi ka Furmay